အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လ ၁၄ရက်နေ့ ၂၁:၀၀MT အချိန်မှာ ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။.
နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေနှင့် အလုပ်သမားဈေးကွက်နှင့်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီး ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းထားကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိပုံရပါသည်။ မတ်လဆွေးနွေးပွဲမှာ အတိုးနှုန်းတင်ပြီးနောက် ယခုနှစ်အတွင်း နောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါသည်။.
အတိုးနှုန်းတင်နိုင်တယ်လို့ဈေးကွက်ကခန့်မှန်းထားတာကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်လာနေပါသည်။ အကယ်၍သာ အမှန်တကယ်အတိုးနှုန်းတင်ခဲ့ပါက ဒေါ်လာတန်ဖိုးဆက်လက်မြင့်တက်မှာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုကဲ့သို့ ဒေါ်လာတက်မည်ဟု တရားသေမှတ်ထားရန်မသင့်ပါ။ Fedဆွေးနွေးပွဲအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲ ဂျဲနက်ရယ်လန်၏ပြောဆိုချက်ကိုပါ ထပ်မံစောင့်ကြည့်ပြီးမှရောင်းဝယ်သင့်ပါသည်။ နောက်လာမယ့်လတွေမှာ အတိုးနှုန်းတင်။ မတင်ဆိုတာကို သူမရဲ့စကားအသွားအလာကိုစောင့်ကြည့်ပြီး အတိုးနှုန်းထပ်တင်ဖို့ပြောဆိုသွားမှသာ ဒေါ်လာတက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။.